Kaydinta Kale - TELES RELAY
CAAFIMAADKA CUSUB FARSHAXANKA QODOBO shaneemo heshiisyo madadaalo DHAQAALAHA
Mas'uuliyiinta Caafimaadka Bulshada ee Cameroon waxay ku dhawaaqayaan talaabooyin horudhac ah
Wasiirka Caafimaadka Dadweynaha, Dr. Manaouda Malachie ayaa ku dhawaaqay qaar ka mid ah tilaabooyinka looga hortagayo in Coronavirus ku faafo Cameroon. War-saxaafadeed uu ku saxeexan yahay Xoghayaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Dadweynaha, Prof. Sinata ...
Aminatou Ahidjo waxay uraraysaa dhalinyarada iyo dumarka reer Garoua
Iyada oo qayb ka ah codaynta laba-labka ah ee Feebarwari 09, 2020, kuxigeenka agaasime waaxeed ee qaybta RDPC ee Bénoué wuxuu wareystay dhalinyarada iyo haweenka doorka aasaasiga ah ee ay tahay inay ciyaaraan. "Waxaan ku dhiiri geliyaa dhalinyarada inay tagaan ...
ELECAM Waxay Wada Dhigaysaa Guddiyada Deegaanka ee Codbixinta
Doorashada Cameroon (ELECAM) waxay dejineysaa guddiyada codbixinta ee maxalliga ah doorashooyinka 9-ka Febraayo sida ku xusan codeeynta. Gudiga waxaa hogaamiya gudoomiye waxaana xubno ka ah wakiil ka socda maamulka…
Naadiyada ayaa dib ugu soo laabtay koongareeska ka dib markii ay bixiyeen deeq lacageed oo ah 350 milyan oo ginni ah
Wejiga labaad ee xilli ciyaareedka 2019/2020 League One iyo Laba Kubadda Cagta ayaa ku soo laaban doona jadwalka kadib markii dowladda Cameroon ay ku wareejisay kobcinta FCFA 350 milyan oo ah deeqaha kooxaha. Xirmadan waxaa loo wareejiyay…
Sarkaalka Warbaahinta, Lucrece Medou Njemba ayaa is casilay
Weriyaha CRTV, Lucrece Medou Njemba ayaa iska casilay xilkii Sarkaalka Saxaafadda ee Kooxda Libaaxyada Indomitable Lions ee Cameroon. Madaxa Adeegga Miisaaniyadda ee TV-ga Newsroom wuxuu u qaatay baraha bulshada inuu ku dhawaaqo is casilaadiisa…
Nidaam cusub oo loogu talagalay dadka socotada ah. *
Safaaradda Faransiiska ee Cameroon waxay ku dhawaaqday Janaayo 22, 2020 boggeeda internetka, kaasoo dhigaya sida soo socota: Laga bilaabo Febraayo 3, 2020, adeegga Visa ee Safaaradda Faransiiska ee Cameroon waxay dejin doontaa nidaam cusub oo bilaash ah…
Bartilmaameedka Qeybta 'CPDM Mfoundi' Waa Cod 100% ah.
TELES RELAY	 Jan 27, 2020 0
Ololeyaal ka hor bisha Feebarwari 9, 2020, waxaa bilaabmay doorashooyinka degmooyinka iyo sharci-dejinta ee qaybta Mfoundi. Qeybta Mfoundi afarta xisbi siyaasadeed ee tartamayaa waxay u tartamayaan 297 kursi oo loogu talagalay…
# 237Vote: CPDM waxay bilaabaysaa olole loogu talagalay Mfoundi
Gawaarida hoteelka de Ville ee Yaoundé waxay u adeegeen furitaanka ololaha doorashada waaxda ee doorashooyinka sharci dejinta iyo dawladaha hoose 9-ka Febraayo. Sabtidan, Janaayo 25, 2020, dhammaan qaybaha CPDM…
Crtv News ayaa u dabaaldegeysa laba sano
Kanaalka wararka ee CRTV ayaa bilaabay dabaaldega munaasabadan Janaayo 24 iyadoo booqashooyin caafimaad uu ku tagey cisbitaalka degmada Biyem-Assi ee Yaoundé. Cusbitaalka degmada ayaa bixiyay latashiyadan caafimaad…
Shil dhiig ku daatay ayaa dilay Magistrate Dingha iyo qoyskiisa
Garsooraha maxkamada Dingha Alain Kanmi iyo afar xubnood oo qoyskiisa ah ayaa ku dhintay shil aad u xun. Shilka ayaa dhacay 3-dii aroornimadii Jimcaha 24-kii, 2020-ka ee Isgoyska Nlongkak ee Magaalada Yaounde. Dhammaan shanta dhibane waxaa ka mid ah; Garsoore Dingha,…
1 2 3 ... 19 soo socda
Tilmaamaha: 47 TALOOYIN KU SAABSAN JOOJI
Tababaraha shaqada looga joojiyay ku dhajinta fiidiyowga galmada ...
Kirismaska ​​2019: -91% dhimis PureVPN. Sidee looga faa’ideysan karaa?
KOOXDA SHAQADA CAMEROON: Dib U Xasuusin Kahortagida Jinsiyadaha…
India: Maamulaha Kashmiri ayaa furay 7 xarumood oo kale…
Cagta OL - OL: Carine Galli wuxuu shiday iftiinka "welwelka leh" Rudi…
Diyaarad sidday mid ka mid ah milkiilayaasha Liverpool…
jiilka is-dalbaday ee shirkadaha ayaa ku kici kara ...
Carri Fisher 'Star Wars' xasuus-qorkeedii lagu soo bandhigay Shiinaha